News – Gliders Helmet - Biggest Online Helmet Store in Myanmar
ကျွန်‌တော်တို့တွေ ကားမောင်းတဲ့အခါမှာ Brake Distance/ Stopping Distance ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တွေမှာရော Brake Distance မရှိဘူးလား ? ရှိပါတယ် . . .ဒါပေမယ့် ကားရဲ့ Brake Distance ကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက် အရှိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး တွက်ချက်နိုင်ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့ Brake Distance ကိုတွက်ချက်ရာမှာ အရှိန်အပြင် ဘရိတ်အုတ်တဲ့နည်းစနစ်နဲ့ မောင်းနှင်သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှာ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။- ဥပမာအနေနဲ့ 150 CC ဘီးတစ်စီးနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ Professional Rider တစ်‌ယောက်နဲ့ သာမာန်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်သူတို့ နှစ်‌ယောက်ကို 80 Km/h နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်စေပြီး နည်းစနစ်မျိုးစုံနဲ့ ရပ်တန့်စေပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဂီယာသီးသန့်အသုံးပြုပြီးရပ်တန့်စေရာမှာ Pro Rider က မီတာ 100 ဝန်းကျင်ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ပြီး သာမာန် Rider ကတော့ မီတာ 140 ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယနည်းလမ်းအနေနဲ့ ‌နောက်ဘရိတ်ကို အသုံးပြုပြီးရပ်တန့်စေတဲ့အခါ Pro Rider က မီတာ 60 ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပြီး သာမာန် Rider ကတော့ မီတာ 90 ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့ ရှေ့ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးရပ်တန့်စေပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း Professional Rider က ီတာ 20 ခန့်မှာ ရပ်တန့်နိုင်ပေမယ့် သာမာန် Rider ကတော့ မီတာ 40 ဝန်းကျင်မှာမှရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာ Rider တွေရဲ့ Reaction Time ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်းမရှိဘဲ နည်းစနစ်တစ်ခုချင်းစီကို Rider တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာသာ စစ်ဆေးထားတဲ့စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ...
Cute - May 8, 2020
Keep your helmet always on !
Man, when I'm riding with the helmet on, I'minvisible. And people just deal with me as the guy onthe bike... it gives youachance to read 'em.Brad Pittကိုယ့်လူရေ . . . ဦးထုပ်ဆောင်းပြီးဆိုင်ကယ်စီးနေချိန်ဆိုရင် ကိုယ်က ကိုယ်ပျောက်နေတာပဲလူတွေက ကိုယ့်ကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်က သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သာ ဆက်ဆံကြတာကြောင့် သူတို့အကြောင်းသိဖို့ပိုလွယ်ကူတာပေါ့ . . .ဘရတ်ဒ်ပစ်(zawgyi)Man, when I'm riding with the helmet on, I'minvisible. And people just deal with me as the guy onthe bike... it gives youachance to read 'em.Brad Pittကိုယ့္လူေရ . . . ဦးထုပ္ေဆာင္းၿပီးဆိုင္ကယ္စီးေနခ်ိန္ဆိုရင္ ကိုယ္က ကိုယ္ေပ်ာက္ေနတာပဲလူေတြက ကိုယ့္ကိုဆိုင္ကယ္ေပၚက သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔သာ ဆက္ဆံၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔အေၾကာင္းသိဖို႔ပိုလြယ္ကူတာေပါ့ . . .ဘရတ္ဒ္ပစ္
ကျွန်တော်တို့ Gliders မှ Sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်တစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရမလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။မိမိစီးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်တွေကို ရှာဖွေဝယ်ယူရတာကလွယ်ကူပါတယ် ။ဥပမာ -DT တို့လို Dirt Bike တွေအတွက် ဦးထုပ်ဆို full face ကိုမှ လျှာထိုးလေးနဲ့ ခပ်ရှည်ရှည်ပုံစံလေးဆိုလိုက်ဖက်ပြီ။R1 တို့ CBR တို့လို SportBike တွေအတွက်ဆိုလည်း ဘဲဥပုံ full face ၊ လေခွင်းအားကောင်းမယ့် Aerodynamic structure တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဦးထုပ်တွေကအကောင်းဆုံးပါပဲ ။Harley တို့ Royal Enfield တို့လို Cruiser နဲ့ Chopper တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ WWII စတိုင်လ်ဦးထုပ်တွေက အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဦးထုပ်ကိုရှာရတာလွယ်လွယ်လေးဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဦးထုပ်ဘယ်လိုရွေးမလဲ ?ဒီနေရာမှာ ပြောစရာ (4) ချက်ရှိပါတယ် …1. အရွယ်အစား (Size)ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆိုတာ ကိုယ်ဆိုင်ကယ်စီးတိုင်း ဆောင်းထားရမယ့်ဦးထုပ်ပါ ။ ဒီလိုုဆိုတော့ သက်တောင့်သက်သာရှိနေဖို့လိုတာပေါ့ ၊ ဒါ့ကြောင့် ဦးထုပ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး၊ သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံး ဦးထုပ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ် ။2. ပုံသဏ္ဌာန် (Shape)သင့်အနေနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့အပြင် ဦးခေါင်းနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ် ။ ကိုယ့်ဦးခေါင်းရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်မူတည်ပြီး Full face ရွေးမလား ၊ open face ရွေးမလား အပုလား အရှည်လား စသည်ဖြင့် လိုက်ဖက်တဲ့ ဦးထုပ်တစ်လုံးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ။3. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (Structure)ဦးထုပ်တစ်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုတာကတော့ လေဝင်လေထွက်စနစ်၊နှစ်ထပ်မှန်၊spoiler စသည့်စနစ်များပါဝင်ခြင်း၊ မပါဝင်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုတာပါ...
မြန်တာလည်းမြန်ပါ ၊ အရှိန်ကိုလည်းသိပါ အရှိန်မြန်မြန်မောင်းနှင်ရတာကို ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူအများစု ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်သာမာန် 125cc ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူတွေဟာ 80 Km/h ကနေ 100 Km/h ထိအမြန်မောင်းနှင်ကြပြီးဆိုင်ကယ်ပါဝါကြီးရင်ကြီးသလို ပိုပြီးမြန်မြန်မောင်းနှင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ သင်အရှိန်ဘယ်လောက် (Km/h) နဲ့မောင်းနေရင် သင့်ဆိုင်ကယ်က တစ်စက္ကန့်မှာ ဘယ်နှစ်မီတာ‌ရွေ့နေသလဲဆိုတာပါပဲ . . . ဒါလေးကိုကြည့်ပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့အခါ သင့်ဆိုင်ကယ်ဟာ တစ်စက္ကန့်မှာ ဘယ်လောက်ပြေးနေတယ်ဆိုတာ သတိရပေးပါ . . . (zawgyi) ျမန္တာလည္းျမန္ပါ ၊ အရွိန္ကိုလည္းသိပါ အရွိန္ျမန္ျမန္ေမာင္းႏွင္ရတာကို ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူအမ်ားစု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္သာမာန္ 125cc ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူေတြဟာ 80 Km/h ကေန 100 Km/h ထိအျမန္ေမာင္းႏွင္ၾကၿပီးဆိုင္ကယ္ပါဝါႀကီးရင္ႀကီးသလို ပိုၿပီးျမန္ျမန္ေမာင္းႏွင္ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာ သင္အရွိန္ဘယ္ေလာက္ (Km/h) နဲ႔ေမာင္းေနရင္ သင့္ဆိုင္ကယ္က တစ္စကၠန႔္မွာ ဘယ္ႏွစ္မီတာ‌ေ႐ြ႕ေနသလဲဆိုတာပါပဲ . . . ဒါေလးကိုၾကည့္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတဲ့အခါ သင့္ဆိုင္ကယ္ဟာ တစ္စကၠန္႔မွာ ဘယ္ေလာက္ေျပးေနတယ္ဆိုတာ သတိရေပးပါ . . .https://www.facebook.com/glidersmyanmar/videos/1332113686960184/